Ngizilolonge ngokwanele: Gelant
U-ELROY Gelant ongumgijimi wakuleli ozobe eyibambe kwiLondon Marathon e-England Isithombe: BACKPAGEPIX
U-ELROY Gelant ukholwa wukuthi uzilolonge ngokwanele njengoba ezogijima omunye wemijaho ephambili iLondon Marathon engo-Okthoba 4 e-England.
Lo msubathi uzobe egijima okokuqala ku-42km ngaphandle kwaseNingizimu Afrika. Kuzobe kungokwesithathu egijima leli banga njengoba ubegxile emabangeni amafushane phambilini.
ILondon Marathon ijwayele ukuheha izinkumbi zabagijimi abaphambili emhlabeni kodwa kulokhu izogijinywa ngabamenywe abahleli kuphela ngenxa yemigomo ehambisana nokulwa nokusabalala kweCovid-19.
UGelant ngomunye wabasubathi ababili baseNingizimu Afrika abamenyiwe. Kwabesifazane kumenywe uGerda Steyn. Lo mjaho ubhekwe ngabomvu ngabathandi bezokugijima ngenxa yombango phakathi kuka-Eluid Kipchoge waseKenya noKenesisa Bekele wase-Ethiopia abahamba phambili kuleli banga.
UGelant ogijima ngaphansi kweBoxer Athletics Club uthe konke sekumi ngomumo njengoba esenezinyanga ezintathu ezilungiselela. Uthe unethemba lokwenza kangcono isikhathi anaso ku-42km esiwu- 2:10:31. Lesi sikhathi wasenza kwiSanlam Cape Town Marathon nyakenye.
“Ngingasho kugcwale ukuthi ngizilolonge ngendlela engigculisayo. Senginesikhathi eside ngiziqeqesha. Abahleli bomjaho bangazisa ngoJuni ngezinhlelo zabo zokuba ngibe yingxenye yawo.
’’Kuyathokozisa ukuba ngigcine ngimenywe emjahweni ohlonishwa kangaka emhlabeni. Okubalulekile ukwenza isikhathi esihle okuzonginika ukuzethemba njengoba ama-Olympic engonyaka ozayo.
’’Okuthokozisayo futhi ukuthi anginakho nakancane ukuthunukala engikuzwayo emzimbeni,” kusho uGelant.
Lo mgijimi wayeseqenjini lakuleli elaya kuma-Olympic eRio de Janeiro, eBrazil ngo-2016 nalapho ayeyibambe ku-5000m.
Uthe inhloso yakhe kulo nyaka bekuwugijima iParis Marathon eFrance egcine ihlehlisiwe. Kodwa uzibona enza kahle kwi-London Marathon njengoba izogijinywa ebangeni elingu 2.1km abazoliphinda amahlandla awu-19.
Ekugcineni kuzoba nebanga lika 1.1km nalapho okuzobe sekubhekwe entanjeni. Ukholwa wukuthi isipiliyoni sakhe se-track and field sizomsiza.
“Ngijwayele ukugijima kwi-track futhi indlela umjaho owenziwe ngayona kulo nyaka iyangijabulisa. Maningi amathhuba okuthi ngenze kahle.
’’Kubalulekile ukuba ngizethembe mina ngaphambi kokuba abantu bangethembe. Okusele manje ukuba lufike usuku olukhulu njengoba sengiqede konke ngasohlangothini lwami,” kusho uGelant. Uthe kungaba yibhonasi enhle kuyena ukungena kwabayishumi abaphambili njengoba kungasho imali enhle kwazise neCovid-19 igadlile kubagijimi.